What is Law of Attraction?आकर्षण को नियम
यो विश्वास गर्नुहोस् वा विश्वास नगर्नुहोस्, आकर्षण को नियम(Law Of Attraction) एक जटिल जादू अनुष्ठान होईन कि एक पुरानो, रहस्य स्कूल वा गोप्य क्रम मा दीक्षा (Studay)आवश्यक छ।
Save 80.0% on select products from MKLEKYY with promo code 8034OIU3, through 10/29 while supplies last.
Click on following link:-
वास्तवमा, आकर्षण को नियम एक सरल र अपरिवर्तनीय विश्वव्यापी सिद्धान्त हो।
आकर्षण को नियम लाई गुरुत्वाकर्षणको रूपमा सोच्नुहोस्।
तपाईंको छानाबाट एक पैसा टस गर्नुहोस्, यो जमीनमा खस्नेछ। तपाईंको ओछ्यानबाट हाम फाल्ने प्रयास गर्नुहोस्, तपाईं खस्नुहुनेछ।
गुरुत्वाकर्षण हाम्रो ब्रह्माण्डको एक अपरिवर्तनीय कानून हो। गुरुत्वाकर्षणको कानूनमा विश्वास गर्नाले तपाईंलाई भविष्यवाणी गर्न र भविष्यमा के हुने आशा गर्न अनुमति दिन्छ।
Ad by Amazon:
Click on link bellow:-
आकर्षण को कानून उही तरीकाले काम गर्दछ।
हाम्रो ब्रह्माण्ड भित्रको चीजहरू अन्य जस्तै चीजहरूको लागि माइग्रेट गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। हामी यहाँ "चीज" शब्द प्रयोग गर्दैछौं किनकी यो कानूनले बिचारहरु, भावनाहरु, मान्छेहरु, वस्तुहरु र हाम्रो ब्रह्माण्ड मा सबै कुरा समावेश गर्दछ।
यो एक विश्वव्यापी सिद्धान्त हो, त्यसैले यो सबै चीजहरूमा लागू हुन्छ।
जस्तै माइग्रेट्स लाई मनपर्दछ।
छोटकरीमा: तपाइँले के पठाउँनुहुन्छ त्यो तपाइँको फिर्ता हुन्छ। तपाईको आवृत्तिले वास्तविकताको निर्धारण गर्दछ जुन तपाईले अनुभव गर्नु हुन्छ। तपाईंको कम्पनले आकर्षणको कानूनलाई एक विशिष्ट तरिकामा सक्रिय गर्दछ, तपाईंको जीवनमा चीजहरूलाई निश्चित मार्गमा देखा पर्दछ, जुन तपाईं "बाहिर पठाउनुहुन्छ" को एक प्रतिबिम्बको रूपमा।
तसर्थ, शारीरिक जीवन - परिस्थितिहरू - दर्पण जस्तै हो, तपाईंलाई परावर्तन गर्दछ। तपाईं ऐनामा प्रतिबिम्ब परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न आफैलाई परिवर्तन नगरी। यो कुञ्जी हो तपाईंले सत्यको र सकारात्मक रूपमा जानको लागि आकर्षणको कानून प्रयोग गर्नुभन्दा अघि तपाईंले वास्तवमै बुझ्न आवश्यक छ।
सरल शब्दमा भन्ने हो भने, आकर्षण को व्यवस्था हाम्रो जीवनमा हामीले ध्यान केन्द्रित गरिरहेको कुरामा आकर्षण गर्ने क्षमता हो। यो विश्वास गरिन्छ कि उमेर, राष्ट्रियता वा धार्मिक विश्वासको परवाह बिना, हामी सबै आकर्षण को कानून सहित ब्रह्माण्ड शासित कानूनहरु को लागी संवेदनशील छौं। यो आकर्षणको कानून हो जुन दिमागको शक्ति प्रयोग गर्दछ जुन हाम्रो विचारहरूमा छ त्यसलाई अनुवाद गर्न र तिनीहरूलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न। आधारभूत सर्तहरूमा, सबै विचारहरू अन्ततः चीजहरूमा परिणत हुन्छन्। यदि तपाईं नकारात्मक कयामत र उदासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ भने तपाईं त्यो बादल मुनि बस्नुहुनेछ। यदि तपाईं सकारात्मक विचारहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ र लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ जुन तपाईंले लक्ष्य राख्नुहुन्छ तपाईंले विशाल कार्यको साथ उनीहरूलाई प्राप्त गर्ने एक तरिका भेट्टाउनुहुनेछ। यस कारण ब्रह्माण्ड यस्तो असीमित सुन्दर ठाउँ हो। आकर्षणको कानूनले आदेश दिन्छ कि जुनसुकै कुराको कल्पना गर्न र दिमागको आँखामा राख्न सम्भव छ यदि तपाईं आफूले चाहेको ठाउँमा पुग्ने योजनामा ​​कार्य गर्नुभयो भने।
आकर्षण को नियम के हो?
आकर्षण को व्यवस्था जीवनको सबैभन्दा ठूलो रहस्य हो। आकर्षणको व्यवस्थाले तिनीहरूको दैनिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने बारे केही थोरै व्यक्तिहरू पूर्ण रूपमा जान्दछन्। चाहे हामी जानेर गरिरहेका छौ वा अन्जानमा, हाम्रो अस्तित्वको प्रत्येक सेकेन्ड, हामी मानव मैग्नेटको रूपमा काम गरिरहेका छौं जसले हाम्रो विचार र भावनाहरू पठाउँदै छ र हामी बाहिर राखेका कुरालाई बढी आकर्षित गर्दछौं।
दुर्भाग्यवस, हामी मध्ये धेरै अझैसम्म हामी भित्र गहिरो बन्द छ कि सम्भाव्यता को लागी अन्धा छन्। नतिजा स्वरूप, यो तपाइँको विचार र भावनाहरु लाई नछाड्न सबै सजीलो हुन्छ। यसले गलत विचार पठाउँदछ र तपाईंको जीवनमा बढी अनावश्यक भावनाहरू र घटनाहरूलाई आकर्षित गर्दछ।
यो भन्नुभएपछि, आकर्षणको कानून तपाईंको जीवन भित्र काम गरिरहेको छ भनेर पत्ता लगाउन उत्सवको लागि एक महान कारण हुनुपर्छ! एक पटक आकर्षणको शक्ति तपाईले बुझ्नु भए पछि यो अब छैन। थप, तपाइँ कसरी तपाइँको दैनिक जीवनमा यसलाई प्रभावी ढ apply्गले लागू गर्न सिक्नु भएको छ, तपाइँको सम्पूर्ण भविष्य सिर्जना गर्न तपाईको हो।
यो लेखमा हामीले आकर्षणको कानूनको बारेमा सिक्यौं। अन्त सम्म पढ्न को लागी धेरै धन्यबाद। टिप्पणी गर्न, र share गर्न नबिर्सनुहोस्।यदि तपाईंसँग सुझाव छ भने तल टिप्पणी गर्नुहोस्।कृपया हाम्रो अन्य लेखहरू पढ्न नबिर्सनुहोस्।